Sida Looga Diiwaangeliyo Shaqo La'aanta Oregon 2021 - Wareegga Wealth
Bogga ugu weyn Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Oregon 2021
Haddii shaqadaada ay si xun u saameysay masiibada COVID-19 taas oo abuurtay kor u kac weyn oo shaqo la’aanta Oregon, Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ogaato sida loo xareeyo shaqo la’aanta Oregon.
Waxaa jira dhawr ilood oo suurtogal ah oo ah gargaar maaliyadeed, oo ay ka mid tahay codsashada dheefaha shaqo la'aanta ee gobolka Oregon.
Dawladda iyo dawlad -goboleedyaduba waxay beddelaan qaar ka mid ah shuruudaha shaqo -la'aanta iyagoo eegaya duruufaha jira.
Oregon gudaheeda, sida gobol kasta oo kaleba, shaqaalaha sida ku meelgaarka ah u bilaa camalka iyagoon wax qalad ah lahayn ayaa u qalma faa'iidooyinka shaqo la'aanta.
Waa kuwan xeerarka aasaasiga ah ee lagu helo macaashka shaqo la'aanta ee Oregon.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato shaqo la'aanta Oregon
Waa sidee ku noolaanshaha Oregon?
Waa maxay Dheefta Shaqo La'aanta ee Oregon?
Shuruudaha u -qalmitaanka Dheefta Shaqo la'aanta Oregon
Goorma ayaa laygu tixgelin doonaa shaqo la'aan Oregon?
Ma buuxisaa shuruudaha mushaharka ugu yar?
Lacag intee le'eg ayaan ka helaa lacagta shaqo la'aanta ee Oregon?
Muddo intee le'eg ayaan heli karaa faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Oregon?
Sideen u xareystaa macaashka shaqo la'aanta? ee Oregon
Miyaad si firfircoon shaqo u raadinaysaa?
Ka warran haddii codsigayga shaqo la'aanta la diido?
Dadka Oregon ee bilaa shaqada ah ee ku jira dusha sare iyo hoose ee qiyaasta dheefta ayaa 9% ka badan ka heli doona gobolka toddobaad kasta laga bilaabo bisha Luulyo, iyada oo macaashka toddobaadlaha ah uu sare u kaco ilaa $ 1,033 shaqaalaha qaarkood.
Faa'iidooyinka sare waxay ka dhasheen isku -hagaajin sanadle ah oo ah heerka faa'iidooyinka shaqo la'aanta gobolka, taas oo ku xiran celceliska mushaharka Oregon.
Marka mushaharka dadka shaqeeya ee reer Oregon uu kordho, gobolku wuxuu kordhiyaa heerarka faa'iidooyinka ugu yar iyo kuwa ugu sarreeya.
Lacagta ugu yar ee toddobaadlaha ah ee xaq u lahaanshaha soo noqnoqda ayaa laga kordhiyay $ 157 toddobaadkii ilaa $ 171. Ugu badnaan wuxuu ka kici doonaa $ 673 ilaa $ 733 toddobaadkii.
Heerka lacagta shaqola'aanta ayaa ku kala duwan hadba dakhliga soo gala shaqaaluhu ka hor inta aysan shaqadooda waayin.
Intaa waxaa sii dheer, Koongarasku wuxuu ku daray $ 300 gunno shaqo la’aan toddobaadle ah Maalinta Shaqaalaha si loo xakameeyo saameynta dhaqaale ee hoos u dhaca masiibada.
Faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee sarreeya ayaa imanaya iyada oo loo -shaqeeyayaasha Oregon iyo dalka oo idil ay soo sheegaan shaqo -yari in kasta oo heerka shaqo la'aanta uu yahay qiyaastii 6%.
Shaqo -bixiyeyaal badan ayaa ka shakisan in dadka qaar si ula kac ah shaqo la’aan u sii joogaan si ay u helaan macaashka shaqo la’aanta, taas oo ay ugu mahadcelinayso dheeraadka dheeraadka ah ee federaaliga ah ee toddobaadlaha ah, oo ka badan inta shaqooyinka qaarkood bixiyaan.
Woqooyiga -galbeed ee Baasifigga ayaa la dhihi karaa waa meelaha ugu quruxda badan ee lagu noolaado Mareykanka.
Waa jannada jaceylka dabeecadda leh oo leh dhul -beereed cagaaran iyo aragtiyo aan caadi ahayn oo ay ku jiraan buuraha dhaadheer ee xiisaha leh iyo biyo -dhacyada qaaliga ah.
Barafka Oregon wuxuu aad ugu badan yahay Cascade Range. Dhinaca kale, inta badan roobabka jiilaalka ee Xeebta Xeebta ayaa u da'a roob, inkastoo baraf xoog leh uu dhaco mararka qaarkood.
Inta badan dhulka buuraleyda ah ee Oregon waxaa ku daadan baraf ka sarreeya 4,500 fuudh (1,400 m) laga bilaabo Diisambar ilaa Abriil.
Nasiib darro, dhammaan faa'iidooyinkaan waxay leeyihiin hal qasaaro oo weyn. Oregon waa mid ka mid ah gobollada ugu qaalisan.
Bishii Luulyo 2021, Oregon waxay gashay kaalinta shanaad ee gobolka ugu qaalisan iyadoo qiimaha nolosha 31.43% uu ka sarreeyo celceliska qaranka.
Dheefta Shaqo La'aanta ee Oregon waa barnaamij loo-shaqeeyaha bixiyo kaas oo ah kaalmo dhaqaale oo ku-meel-gaar ah shaqaalaha aan wax qalad ah ku lahayn shaqala'aankooda gaarka ah ee buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka Oregon.
Faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee dawladda ayaa laga yaabaa inay heli karaan shaqaalaha ay saameysay shaqo ka joojintu, fasax aan la bixin oo ka socda Barnaamijka Ballaarinta Dheefta UO, ama mushahar dhimis kale.
U -qalmitaanka faa'iidooyinka shaqo la'aanta iyo xaddiga waxaa go'aamiya Waaxda Shaqada ee Gobolka Oregon, mana sheegi karno sida ay u badan tahay in gobolku tixgeliyo codsi.
Xeerarka gobolka iyo federaalka ayaa la ansixiyay si wax looga qabto isbeddelada shaqada iyo luminta dakhliga sababaha la xiriira masiibada COVID-19.
Xaaladaha badankood, gobolka Oregon taariikh ahaan ma siin ardayda saacadaha buuxa dheefaha shaqo la'aanta. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shaqaalaha ardayda ayaa laga yaabaa inay u qalmaan faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta ee Oregon.
Shaqaalaha ardaydu waxay codsan karaan wakhti kasta si ay u eegaan haddii ay u qalmaan faa'iidooyinka ay samaysay Waaxda Shaqada ee Oregon
Oregon gudaheeda, Waaxda Shaqadu waxay maamushaa dheefaha shaqo la'aanta waxayna go'aamisaa u-qalmitaanka iyadoo loo eegayo kiis-kiis.
Codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha u -qalmitaanka ee soo socda si ay u helaan faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Oregon:
Si aad ugu qalanto barnaamijkan waxtarka, waa inaad noqotaa degane Oregon oo buuxisaa dhammaan shuruudaha soo socda:
Shaqo la'aan iyo
Ka shaqeeyey Oregon 12 -kii bilood ee la soo dhaafay (muddadan ayaa laga yaabaa inay ka dheeraato xaaladaha qaarkood) iyo
Aad kasbatay mushaharka ugu yar si waafaqsan tilmaamaha Oregon, iyo
Haddii aad si firfircoon usbuuc walba shaqo u raadsato, waxaad heli doontaa dheefo.
Dakhligaagii hore waa inuu buuxiyaa xadka ugu yar.
Waa inaad shaqo la'aan noqotaa adiga oo aan lahayn qalad adiga kuu gaar ah, sida lagu qeexay sharciga Oregon.
Waa inaad awood u leedahay inaad shaqayso, la heli karo oo si firfircoon shaqo u raadinayso.
Oregon waxay fududeysay shuruudihii ugu dambeeyay intii lagu jiray masiibada COVID-19. Laguuma arko in aad tahay "qof aan shaqayn karin" haddii aad karantiil ku jirto sababtuna tahay coronavirus -ka cusub, is -karantiil, ilaali carruurta aan tegin dugsiga ama daryeelin xubin qoyska ah.
Waxaa laga yaabaa inaad weli u qalanto shaqo la'aan haddii aad guriga ku xanuunsato ama isbitaal la dhigto COVID-19, ama haddii aad guriga joogto si aad uga fogaato halista soo-gaadhista.
Intaa waxaa sii dheer, uma baahnid inaad si firfircoon u raadsato shaqo si aad ugu qalanto caymiska shaqo la'aanta-kaliya waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad shaqo raadsato marka fogeynta bulshada iyo is-karantiilnimada aan loo baahnayn sababtuna tahay coronavirus-ga cusub.
Si loo daboolo dakhliga ugu yar, waa inaad kasbatay ugu yaraan $ 1,000 ama aad shaqaysay 500 saacadood sannadka aasaasiga ah.
Wadarta mushaharka aad kasbatay sannadkan waa inuu ahaadaa ugu yaraan 1.5 jeer rubucaaga iibka ugu sarreeya isla muddadaas. Sannadka aasaasiga ahi waa afarta ugu horraysa shantii rubuc ee u dambaysay ka hor codsiga shaqo la'aanta.
Ku dhawaad ​​gobolada oo dhan waxay eegaan taariikhdaada shaqo iyo dakhligii ugu dambeeyay muddo hal sano ah “muddada aasaasiga ah” si loo go’aamiyo xaq u lahaanshahaaga shaqo la’aanta.
Oregon gudaheeda, sida gobollada badankood, muddada aasaasku waa afarta ugu horreysa shanta meelood ee taariikheed ee buuxa ka hor intaadan gudbin sheegashada dheeftaada.
Inta lagu jiro xilliga aasaasiga ah, waa inaad buuxisaa ugu yaraan mid ka mid ah shuruudaha soo socda si aad shaqo la'aan u noqoto:
Waa inaad kasbatay ugu yaraan $ 1,000 mushahar intii lagu jiray muddada saldhigga iyo wadarta guud ee mushaharkaaga saldhigga waa inay ahaataa ugu yaraan 1.5 jeer mushaharka rubuca ugu sarreeya muddadaada saldhigga, ama
Waa inaad shaqaysay ugu yaraan 500 saacadood intii lagu jiray muddada saldhigga.
Qaddarka dheeftaadu wuxuu ku xiran yahay waxqabadkaaga shaqo iyo mushaharkaaga inta lagu jiro xilliga aasaasiga ah ee kor lagu qeexay. Gunnada shaqo la'aanta ee ugu yar Oregon waa $ 122 asbuucii ugu badnaanna waa $ 524 toddobaadkii.
Waxaad isticmaali kartaa Qiyaasta Caymiska Shaqo la'aanta Oregon si aad u ogaato inta aad u qalmi karto.
Dawladdu waxay dhaaftay Gargaarka Coronavirus, Relief, iyo Amniga Dhaqaalaha (CARES). Xirmadan kicinta ah waxay siin doontaa $ 600 oo dheeri ah usbuucii qof kasta oo u qalma caymiska shaqo la'aanta illaa Luulyo 31 -keeda.
Macaashka joogtada ah ee shaqo la’aantu badanaa waa 1.25 boqolkiiba dakhliga shaqaalaha muddo 12 bilood ah. Tusaale ahaan, shaqaalaha qaata $ 12.50 saacaddii oo shaqeeyey 40 saacadood toddobaadkii sannadkii la soo dhaafay wuxuu qaadan doonaa $ 325 toddobaadkii lacagta shaqola'aanta.
Lacagta ugu yar ee soo noqnoqota ee soo noqnoqota waa $ 151 toddobaadkii. Lacagta ugu badan waa $ 648 toddobaadkii. (Codsiyada cusub ee bilowga ah ee la soo gudbiyey Juun 28 -keedii ama ka dib, kan ugu yar waa $ 157 ugu badnaanna waa $ 673).
Qaddarka lacagta shaqola'aanta ee toddobaadlaha ah ee PUA waxaa loo xisaabiyaa si la mid ah gunnada shaqo la'aanta ee joogtada ah, laakiin PUA waxay leedahay lacagta ugu yar ee ugu yar. Gunnada ugu yar ee PUA waa $ 205 asbuucii. Lacagta ugu badan waa $ 648 toddobaadkii.
Celceliska lacagta shaqola'aanta toddobaadlaha ah ee Oregon waxay u dhigantaa shaqo waqti-buuxa ah oo ah $ 16.75 saacaddii, taas oo u dhiganta ku dhawaad ​​$ 35,000 sannadkii, sida laga soo xigtay Adeegyada Shaqada.
Tan waxaa ka mid ah $ 300 gunno toddobaadle ah oo kordhisa celceliska guud ee bixinta ku dhawaad ​​80%.
Sida caadiga ah, waxaad qaadan kartaa gunnada shaqo la'aanta ilaa 26 toddobaad gudahood muddo ah ilaa 52 toddobaad. Si kastaba ha ahaatee, Sharciga CARES wuxuu kordhiyaa muddadan 13 toddobaad si aad u hesho macaashka shaqo -la'aanta ilaa 39 toddobaad.
Qaddarkaaga faa'iidada toddobaadlaha ah waa 1.25% wadarta mushaharka muddadaada saldhigga ah, oo ku xiran toddobaad kasta ugu yaraan $ 151 iyo ugu badnaan $ 648.
Waxaad codsan kartaa dheefaha shaqo la'aanta adiga oo arji ka xereynaya Adeegga Shaqada ee Gobolka Oregon.
Waxa kale oo aad ku soo gudbin kartaa codsi taleefan 1-877-FILE-4-UI, laakiin wicitaanada oo aad u badan awgood, waa inaad ku dalbataa internetka haddii ay suurtogal tahay.
Waxaad u baahan tahay inaad bixiso macluumaadkaaga shakhsiyeed, sida Lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga ama lambarka diiwaangelinta Alian iyo lambarka taleefanka.
Waxa kale oo lagaa codsan doonaa inaad siiso macluumaadka shaqaalaynta, oo ay ku jiraan macluumaadka mushaharka, dhammaan shaqabixiyeyaashaagii hore labadii sano ee la soo dhaafay iyo inaad caddayso inaad shaqo la'aan tahay adiga oo aan lahayn qalad adiga kuu gaar ah.
Ka dib markaad gudbiso arjigaagii hore, waa inaad soo gudbisaa arjiga faa'idada toddobaadlaha ah, laga bilaabo Axadda codsiga kadib - xitaa haddii codsigaaga weli la baarayo.
Shuruudda tan ayaa ah in aad heshay mushahar ugu yaraan laba meelood afar muddada saldhigga. Intaa waxaa dheer, waa inaad buuxisaa xadka dakhliga ugu yar rubucaaga ugu sarreeya, saddexda meelood ee ugu hooseeya, iyo muddadaada saldhigga oo dhan.
Waa inaad shaqo la'aan noqotaa haddii lagu siiyay ogeysiis, aad lumisay shaqadaada oo qayb ka ah dhimista ama aadan adigu khaladkaaga ahayn si aad ugu qalanto lacagta shaqo la'aanta.
Haddii shaqada lagaa eryo sababtoo ah ma aadan lahayn xirfadihii lagaa rabay inaad qabato shaqada, ama si fudud kuma habboona, lagama maarmaan ma aha in lagaa reebo macaashka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad gashay “khalad”, xaq uma lihid lacagta shaqo la’aantu.
Oregon gudaheeda, anshax -xumada waxaa ka mid ah, waxyaabo kale, ku -xadgudub ula kac ah xeerarka loo -shaqeeyaha, ku -guul -darreysiga inuu buuxiyo heerar uu loo -shaqeeyuhu si macquul ah uga fili karo in shaqaaluhu sameeyo ama dabeecad dayacaad ah oo aad u badan ama halis ah oo aan tixgelinayn danaha loo -shaqeeyaha.
Tusaale ahaan, inaad u muuqato inaad ku shaqayso khamri ama maandooriye, ama inaad maqnaato dhowr jeer cudurdaar la'aan ka dib markaad heshay digniin qoraal ah, guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhaqan -xumo.
Haddii aad ka tagto shaqadaada, xaq uma yeelan doontid macaashka shaqo la'aanta haddii aadan haysan sabab muhiim ah oo aad shaqada uga tagto.
Guud ahaan, shuruudda sababaha wanaagsan ayaa la buuxiyaa marka qofka caadiga ah ee xaaladdaada ku jira uusan lahayn wax kale oo aan ahayn inuu booska ka tago.
Tusaale ahaan, haddii xaaladaha shaqadaadu khatar ku yihiin caafimaadkaaga iyo badbaadadaada oo loo -shaqeeyahaagu diido inuu wax ka qabto, waxay u badan tahay inay tahay sabab muhiim ah.
Dhinaca kale, haddii aad iskaga tagto sababta aadan ugu faraxsanayn mushaarka, ma noqon doonto sabab wanaagsan.
Si aad ugu qalanto macaashka shaqo la'aanta, waa inaad awood u leedahay inaad shaqayso, awoodo inaad shaqo qaadato oo shaqo raadsato.
Haddii lagu siiyo boos ku habboon, waa inaad aqbashaa. Haddii shaqo ku habboon tahay marxaladaha hore ee shaqo la'aanta waxay ku xiran tahay dhowr arrimood; kuwaas oo ay ka mid yihiin
heerka xirfadda iyo tababarka loo baahan yahay,
isku ekaanshaha shaqada iyo shaqaalayntaadii hore,
heerka mushaharka shaqada iyo
masaafada u dhexaysa shaqada iyo degenaanshaha goobta shaqada.
Si kastaba ha noqotee, waqti ka dib, waxaa lagaa filayaa inaad beddesho jaangooyooyinkaaga oo aad ka fekerto inaad qabato shaqo u baahan xirfado yar ama aan mushahar yarayn.
Waa inaad sameysaa shaqo raadin ku habboon, oo ay ku jirto inaad la xiriirto shaqo -bixiyeyaasha cusub toddobaad kasta.
Waa inaad diiwaangelisaa dadaallada shaqo -raadinta, oo ay ku jiraan loo -shaqeeyayaasha aad la xiriirtay, taariikhaha aad la xiriirtay, iyo natiijada.
ED ayaa laga yaabaa inuu kula soo xiriiro adiga ama xiriiriyaha loo -shaqeeyahaaga si dib loogu eego dadaalladaada.
Haddii laguu diido, waxaad heli doontaa bayaan qoran oo sheegaya sababta diidmadaada.
Waad xareyn kartaa diidmo, laakiin waa inaad ku soo gudbisaa 20 maalmood gudahood taariikhda boostada oo aad sii waddo helitaanka faa'iidooyinka toddobaad kasta marka diidmada la farsameeyo.
Dad badan ayaa shaqadooda ku waayi kara masiibada, laakiin sidoo kale waxaa jira shaqooyin loo baahan yahay COVID-19 awgeed.
Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto go'aamo maaliyadeed oo adag, laakiin ha ka rajo dhigin ama ha ka baqin inaad raadsato kaalmo dhaqaale.
Waxaad xaq u leedahay dhageysi si aad racfaan uga qaadato go'aan kasta. Mararka qaarkood dadku waa inay codsadaan dhageysi si ay u helaan gunnada shaqo la'aanta.
Waa inaad codsataa dhageysi qoraal ah waxaadna haysataa 20 maalmood oo keliya laga bilaabo taariikhda go'aanka la diray. Haddii aad codsato dhegeysi waqti dambe, waxaad u baahan doontaa inaad muujiso sabab sax ah oo aadan hore ugu qaban dhegaysiga.
Waa inaad codsataa dhageysi isla marka aad ogaato go'aanka. Sidoo kale waa inaad raadsataa kaalmo sharci sida ugu dhaqsaha badan.
Sida Loo Codsado Shaqo La'aanta Oregon - The Motley Fool
Caymiska Shaqo la'aanta - Oregon.gov
Caymiska Shaqo la'aanta Oregon | Faa'iidooyinka.gov
Uruurinta Faa'iidooyinka Shaqo la'aanta ee Oregon - Nolo
Waa ayo La-taliye Maaliyadeed, sideese ku noqon kartaa?
La-taliyayaasha maaliyadeed waxaa badanaa loogu yeeraa "la-taliyayaal maaliyadeed." Xirfadlayaashani waxay dadka ka caawiyaan maalgashiga iyo qorshaynta hawlgabka, sidoo kale…
SIDA LOOGU HELO DHISMAHA ARDAYDA DOBE 2022
Haddii aad tahay arday ku tiirsan Adobe's apps-ka hal-abuurka leh si ay kaaga caawiyaan naqshadayntaada ama shaqadaada farshaxanka,…
Dadku waxay u shukaansadaan sababo kala duwan - madadaalo, raaxaysi, dariiqa guurka, iyo qaar kaloo badan. Doorashada cidda…
Waa maxay Deynta Kubadda Barafka? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Ma u rajaynaysaa inaad daynta uga baxdo wanaag? Hubi inaad timid meesha...